Warqad uu Wardere u diray Amnesty International oo loo bedelay af Soomaali.
waa xil saaran Amnesty International inay booqato oo u hadasho afarta Soomaalida ee ku jira xabsiga Mombasa Kenya.
Amnesty International oo loo soo gaabiyo AI waa hay’ad loogu talo galay inay ka shaqayso xuquuqda aadanaha ee caalamka iyo inay booqato maxaabiista xiran gar ahaan kuga siyaasadda u xiran ama kuwa lagu xad gudbo si ay u soo bandhigto jirdil iyo wixii loo gaystay iyo inay u doodo dadka aan codka lahayn.
Hase yeeshee marka la fiiriyo Somaliya AI shaqadeedii ma qaban umana hadlin dadka dulman ee Soomaaliya in badan. Anigoo aanan dafirayan inay dhowr goor ka hadleen ama tababaro siiyeen dad Soomaaliya ayaan haddana leyahay hawshaasi waa 10% intii loo baahnaa.
Labo iyo tobankii sano ee u danbeeyay Soomaaliya ma lahayn dawlad ka wada mas’uul ah dalka oo dhan oo ilaalisa nidaamka iyo sharciga iyo xuquuqda bulshada. Dalku wuxuu galay dagaal sokeeye iyo bur bur iyo dawlad la’aan. kumanaan qof bay dileen kooxo iska soo horjeeda oo hubaysan malyanna waa qixiyeen. falalka loo gaystay dadka Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa dil, dhac, ciqaab, qaxooti la xumeeyay, kufsi la kufsaday haween iyo gabdho caruur ah intaba, dad la waayay, iyo qafaalasho ama madax-furasho.
Amnesty International waxay samayn kartay inay isku daydo inay joojiso ama ka hortagto ku tumashada xuquuqda aadanaha ee ka dhacaysay Soomaaliya ama cod dheer adduunka ku gaarsiiso waxa halkaas ka dhacaya hase yeeshee indhaha ayay ka qabsatay sidaas darted ayay dadka Soomaaliyeed maanta ku tiriyaan Amnesty International taariikhda bogga madaw. Inkastoo ay AI jirtay ilaa 1961 haddana xaggee jirtay markii dadka Soomaaliyeed ay u baahnaayeen?. Dadka Soomaalida waa ay ka bixi doonaan dhibaatada dawlad la’aantu keentay waana ay kala garan doonaan kuwii wax taray iyo kuwii ka seexday!.
AI haddii ay rabto inay muujiso inay ka naxayso dhibaatada dadka Soomaaliyeed soo gaartay ama ay u hadasho dadka codkeeda u baahan ma ahan inay qas iyo hanjabaad la tagaan shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee ka socda Eldoret, Kenya, halkaas oo uu ka socdo dadaal wayn oo ah dib u heshiinta umadda Soomaaliyeed. Hanjabaadaas oo loo arki karo is tus-tus ee waa inay muujiso waxqabad dhab ah iyo inay u hadasho dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysay oo xuquuqdooda lagu xad gudbo had iyo goor hana ka bilowdo inay xabsiga ku booqdaan afarta qof ee Soomaalida oo lagu hayo xabsiga Mombasa, Kenya
Afartaas qof oo la yiri dalka Kenya ayay sharci darro ku soo galeen ( Soomaaliya weli dawlad ma leh dagaalona waa ka dhacaan dadkana waa ka qaxaa) ayagoo xabsiga ku jirana ayay argagixiso qarxisay hotel ay lahaayeen Israa’iiliyiinta oo Mombasa ku yaalay gantaalna ku tureen diyaarad ay leedahay Israa’iil oo ka duulaysay Mombasa isla markaasna 12 qof ayaa lagu eedeeyay oo la xiray hase yeeshee labadii qof ee United States ka soo jeeday si dhaqso ah ayaa loo siidaayay ka dib markii ay dawladdoodii u hadashay. Afartan qof ee Soomaalida ah inkastoo ay xirnaayeen markii amuurtu dhacaysay haddana dawlad u hadasho ma leh Amnesty International ayay waajib ku tahay inay doorkeeda qabsato.
Shabakada Amnesty Internetional: www.amnesty.org
Habeenkii Sharfidda iyo Aqoonsiga Muwaadiniinta Wax u qabtay Bulshada Minneapolis .... GUJI...l
Mahamoud Nur Wardere | mnwardere@yahoo.com
Former Minneapolis, Minnesota Mayoral Candidate
Faafin Ciid Fidri 2002